राशि अनुशार भाग्य र भविष्य छुट्याउन सकिन्छ, यी चार राशि धेरै शक्तिशाली हुन्छन् ! « गोर्खाली खबर डटकम
राशि अनुशार भाग्य र भविष्य छुट्याउन सकिन्छ, यी चार राशि धेरै शक्तिशाली हुन्छन् !
मानिसको भाग्य र भविष्य जन्म अनुसार नै तय भएको हुन्छ । जन्मदिन (जन्म समय) का आधारमा उसको राशि तय हुन्छ । त्यही राशि अनुशार कसको भाग्य र भविष्य कसतो भन्ने छुट्याउन सकिन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार, मानिसको जीवन उनको राशि अनुसार चल्ने गर्छ। कुन मानिसमा ग्रह नक्षत्रहरुको कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने राशि आफैले बताउने गर्दछ। यस आधुनिक युगमा हामी ज्योतिष शास्त्रको विश्वास गर्दैनौ, तर कतिपय समस्याहरु ज्योतिष शास्त्रद्वारा मात्र हल हुन्छ भने कतिपय त ज्योतिष शास्त्र बिना असम्भव नै हुन्छ।
मधेस प्रदेश सरकारको पाँचवटा बस कवाड बन्दै
कपूर खानदानका अविवाहित ५ छोरीः जो दुलाहाको पर्खाइमा छन् [तस्बिरसहित]